पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, कुनमा कति सस्तियो ? - Deshko News Deshko News पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, कुनमा कति सस्तियो ? - Deshko News
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, कुनमा कति सस्तियो ?
नेपाल आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल मूल्य घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेपछि खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य घटाएको निगमले जनाएको छ ।
तिनवटै पेट्रोलियम पदार्थमा दुई/दुई रूपैयाँ घटाएको छ । यससंगै अब यसअघि १०० रुपैयाँ प्रतिलिटरको पेट्रोल अब ९८ रुपैयाँमा पाइने आयल निगमका प्रवक्ता सीताराम पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस्तै डिजेल र मट्टितेल अब प्रतिलिटर ७४ रुपैयाँमा पाइने छ । यसअघि डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्य पनि घटाइएको छ । अब ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १३ सय ५० रुपैयाँ भएको छ ।
आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ घटाइएको छ । यसअघि ८६ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको हवाई इन्धनको मूल्य अब ८४ रुपैयाँ हुनेछ । अब हवाइ भाडा समायोजन पनि हुनेछ । असार २ गते पनि निगमले मूल्य घटाएको थियो ।